Out of the Field – Online Khabar
४. प्रहरीको गोप्य धन्दा ! जुवा र मिटर ब्याजमा मिलापत्र !
६. वामदेवलाई अर्को झड्का, प्राधिकरण गठन गरेर नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्रीले मानेनन्
७. सरकारले प्राथमिकता तोक्न सकेन, त्यसैले नतिजा आएन
८. मिटुमा फँसेका आलोकनाथलाई लाग्यो गतिलो झट्का
१०. श्रीलंकाली संसदबाट राजापाक्षेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित
११. ‘चङ्गाचेट’मा दर्शक बढे, निर्देशक भन्छन्–‘मेरो भोगाई सधै यस्तै’
१२. चिनी रोगसँग नडराऔं, क्यालोरी नापेर खाऊँ
खर्बुजामा रोनाल्डो, मेस्सी र एमबाप्पे !
३१ असार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको लहर सबैतिर पुगेको छ । विश्व फुटबल पछ्याउने धेरै समर्थकले नौला लाग्ने काम पनि गरिरहेका देखिन्छन् । रसियामा एक कुकले पिजामा खेलाडीको चित्र बनाएर चकित पारे जस्तै चीनमा भने विद्यालयका एक शिक्षकले खर्बुजामा खेलाडीको आकृति बनाएका छन् । चीनको सेनयाङ टुरिजम स्कूलका शिक्षक जियाङ जोङमिनले खर्बुजामा पोर्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो, […]
क्रोएसियाको जर्सी लगाएर मन्त्रिपरिषद बैठक
२९ असार, काठमाडौं । क्रोएसिया विश्वकप फुटबलमा पहिलोपटक फाइनलमा पुगेपछि समर्थकहरुले विभिन्न शैलीमा खुसी मनाए । इतिहास जितेको उत्सव मनाइरहेका बेला क्रोएसियाको मन्त्रिपरिषदमै पनि खुसी मनाउने भिन्न शैली देखियो । इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै टिम विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेपछि क्रोएसियामा मन्त्रीहरुले जर्सी लगाएरै मन्त्रिपरिषद बैठकमा सामेल भएका हुन् । उनीहरुले राष्ट्रिय जितको उत्सव मनाउनुका […]
गोलको खुसी मनाउँदा पेलिए फोटो पत्रकार !
२८ असार, काठमाडौं । बुधबार राति इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले हराएर क्रोएसिया पहिलोपटक विश्वकप फाइनलमा पुग्यो । त्यसको खुसी मैदानमा मात्रै होइन मैदानबाहिर पनि निकै फैलियो । पाँचौ मिनेटमा एक गोलले पछि परेको क्रोएसियाका लागि अप्रत्याशित जित निकाल्ने क्रममा खेलको ६८ औं मिनेटमा पेरेसिक र १ सय ९ औं मिनेटमा म्यान्जुकिजले विजयी गोल गरे । गोलपछि […]
खुसीको आँसुदेखि टियर ग्यासको आँसुसम्म !
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा फ्रान्स फाइनलमा पुगेपछि पेरिसमा उत्सव मनाइरहेका समर्थक खुसीको आँसुदेखि टियर ग्यासको आँसुसम्म पुगेका छन् । बेल्जियमलाई १–० ले हराउँदै फ्रान्स १२ वर्षपछि विश्वकप फाइनलमा पुगेको खुसीयाली मनाइरहेका समर्थकहरु उच्छृंखल हुन थालेपछि प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । सन् १९९८ को विश्वकप जितेको फ्रान्स सन् २००६ को फाइनलमा इटालीसँग […]
इंग्ल्याण्डका समर्थकलाई संयमित हुन चेतावनी
२६ असार, काठमाडौं । विश्वकपका बेला संयमित रहन प्रहरीले इंग्ल्याण्डका समर्थकलाई चेतावनी दिएको छ । विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनको खेलका बेला इंग्ल्याण्डमा कानुन विपरीत ३ सय ८७ घटना भएका थिए । जसमा ७० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यसैले विश्वकपका बेला संयमित रहन प्रहरीले समर्थकहरुलाई चेतावनी दिएको हो । प्रहरीको भनाइअनुसार विशेष गरी […]
विश्वकपमा जोर्डन पिकफोर्ड चम्किँदा क्रिकेट खेल्दै जोय हार्ट
२५ असार, काठमाडौं । विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा इंग्ल्याण्डले स्वीडेनलाई हराउँदा म्यान अफ दि म्याच बनेका गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्ड अहिले विश्व फुटबलमा आशलाग्दा गोलकिपरमध्ये एक हुन् । इंग्ल्याण्डका पछिल्ला तीन प्रमुख प्रतियोगितामा गोलपोस्ट सम्हालेका जोय हार्ट विश्वकप टोलीमै नअटाउँदा प्रशिक्षक ग्यारथ साउथगेटले पिकफोर्डमाथि विश्वास देखाए । जुन उत्कृष्ट प्रमाणित पनि भइरहेको छ । पिकफोर्ड विश्वकपमा चम्किरहँदा हार्ट […]
हारपछि रंगशालामा पोखियो स्वीडिस फ्यानको भावुकता
२४ असार, काठमाडौं । स्वीडेनको विश्वकप सपनामा ईंग्ल्यान्ड बाधक बनेपछि स्वीडिस फ्यानहरुले मन थाम्न सकेनन् । उनीहरुले बर्बरी आँशु झारेर रोएको दृष्य निकै भावुक थियो । क्वार्टरफाइनलमा ईंग्ल्यान्डलाई स्तब्ध पारेर आफ्नो देशले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने विश्वासका साथ हजारौं स्वीडिस फ्यानहरु खेल हेर्न रसिया आएका थिए । तर, गारेथ साउथगेटको टिमले अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै २-० को जित […]
इंग्ल्याण्ड र कोलम्बियालार्इ फेरि खेलाउन माग
काठमाडौं । विश्वकपमा मंगलबार राति भएको अन्तिम १६ को इंग्ल्याण्ड र कोलम्बिया बीचको खेल फेरि खेलाइनुपर्ने माग गर्दै कोलम्बियाका दुई लाख ८० हजार जना समर्थकले हस्ताक्षरसहित फिफालाई निवेदन दिएका छन् । खेलमा पेनाल्टी सुटआउटमामा इंग्ल्याण्डले हराएपछि कोलम्बियाका आक्रोशित समर्थकहरुले फिफाको निष्पक्ष खेलको नियमअनुसार फेरि खेलाइनुपर्ने माग गरेका हुन् । दोस्रो हाफमा कोलम्बियाका कार्लोस सान्चेजले हृयारी […]
विश्वकपमा भएको चुम्बन प्रकरणको बहस चीनमा
२१ असार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको रिपोर्टिङमा रहेका बेला पत्रकारमाथि भएका चुम्बनका घटनालाई लिएर चीनमा सामाजिक सञ्जालमा बहस देखिएको छ । विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका बेला धेरै महिला पत्रकारमाथि भएको चुम्बनलाई यौन हिंसाका रुपमा बहसमा ल्याइएको तर पुरुष पत्रकारमाथि भएको उस्तै घटनालाई सहज रुपमा लिइएको भन्दै बहस भइरहेको छ । विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरिरहेका […]
जापानको खेल मात्रै होइन, व्यवहार पनि राम्रो !
१९ असार, काठमाडौं । विश्वकपमा जापानी समर्थकले हरेक खेलपछि आफू बसेको प्याराफिट सफा गरेर सकारात्मक सन्देश दिइरहेका बेला खेलाडीहरुले पनि खेलबाट मात्रै होइन, व्यवहारबाट पनि मन जितेका छन् । विश्वकपमा अन्तिम १६ को खेलमा बेल्जियमसँग ३-२ ले पराजित भएपछि जापानी खेलाडीले आफूले प्रयोग गरेको डे्रसिङ रुम सफा गरेका छन् । साथै उनीहरुले रसियन भाषामा नै […]
बेल्जियमले १६ गोल हाने टीभीको पैसा फिर्ता
काठमाडौं । बेल्जियमका फरवार्ड ड्राइस मेर्टेन्सले आफ्ना साथीहरुलाई निःशुल्क टेलिभिजन दिलाउनका लागि विश्वकपमा धेरै गोल गर्न चाहेको बताएका छन् । बेल्जियमको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी क्रिफेलले बेल्जियमका ग्राहकलाई टिमले रुस विश्वकपमा १६ गोल गरेमा नयाँ किनिएको टेलिभिजनको पैसा फिर्ता दिने घोषणा गरेको छ । बेल्जियमले विश्वकपमा अहिलेसम्म समूह चरणका तीन खेलमा ९ गोल गरेको छ । त्यसमध्ये […]
10 ५ महिना
रसियन पिज्जामा रोनाल्डो र स्वारेजको अनुहार
काठमाडौं । रसियामा विश्वकप फुटबलको रौनक चढिरहेका बेला केहीले फरक कामबाट मानिसहरुको ध्यान तानेका छन् । यस्तैमा रसियाको एक होटलका कुकले खेलाडीको अनुहार भएको पिजा बनाएर ग्राहकको सेवा गरिरहेका छन् । रसियाको सेन्ट पिटर्सवर्गमा रहेको होपहेड टाप रुम बारका भ्यालेरी माक्सिमचिकले विश्वकपमा शनिबार राति उरुग्वे र पोर्चुगलको खेल हुने भएकाले दिनभर लुइस स्वारेज र क्रिष्टियानो […]
जर्मनीलाई हराएर फर्किएका खेलाडीलाई कोरियामै अण्डा प्रहार
काठमाडौं । विश्वकपमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा विश्वविजेता जर्मनीलाई २-० ले हराउँदा दक्षिण कोरियन खेलाडीको चर्चा सबैतिर भयो । कोरियाको जितमा मेक्सिकोसम्म र्‍याली निस्किरहेका बेला कोरिया फर्किएका खेलाडीलाई भने अण्डा प्रहार भएको छ । घर फर्किएका खेलाडीमाथि भएको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले सबै आश्चर्यचकित भएका छन् । कोरिया फर्किएका खेलाडीसहित भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा केही मानिसले खेलाडीहरुमाथि अण्डा […]
श्रीमती सुत्केरी भएपछि घर गए इंग्ल्याण्ड मिडफिल्डर डेल्फ
काठमाडौं । विश्वकपका लागि रसियामा रहेका इंग्ल्याण्ड टिमका मिडफिल्डर फाबियन डेल्फ तेस्रो सन्तानको पिता बनेपछि घर फर्किएका छन् । २८ वर्षका डेल्फले समूह चरणमा ट्युनिसियाविरुद्धको खेल खेलेका थिएनन् । पानामाविरुद्ध दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश पाएका उनले बेल्जियमविरुद्ध पूरा समय खेलेका थिए । म्यानचेस्टर सिटीका खेलाडी रहेका उनलाई विश्वकप सुरु हुनुअघि नै विश्वकप चलिरहँदा यस्तो अवस्था […]
मेस्सी बस्ने होटलबाहिर आँखा झिम्क्याइरहेका रोनाल्डो !
काठमाडौं । विश्वकपमा अन्तिम १६ को खेलमा अर्जेन्टिनाले शनिबार राति पौने ८ बजे फ्रान्सको सामना गर्ने छ । खेल रसियाको कजानमा हुनेछ । कजानमा अर्जेन्टिनी टिमले फ्रान्सको सामना गर्नुअघि आँखा झिम्याइरहेका क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई पाउने छन् । कजानमा अर्जेन्टिनी टिम बस्ने होटल बाहिरको भित्तामा ठूलो आकारमा क्रिष्टियानो रोनाल्डोको पेन्टिङ बनाइएको छ । पेन्टिङमा रोनाल्डो आँखा झिम्क्याइरहेका […]
‘कोरियन मेक्सिकन भाइ भाइ … !’
१४ असार, काठमाडौं । विश्वविजेता जर्मनीलाई विश्वकप समूह चरणबाटै घर पठाउँदा दक्षिण कोरियन टिमको सान्त्वना खेलले धेरै समर्थकलाई खुशी दियो । दक्षिण कोरियाको जितमा यसरी खुसी हुनेमा कोरियन भन्दा धेरै मेक्सिकन थिए । विश्वकपमा समूह ‘एफ’ को खेल चलिरहँदा अघिल्लो चरणमा जाने सम्भावना सबैको थियो । तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको मेक्सिकोले स्वीडेनसँग गोल खाइरहँदा जर्मनी […]
डाक्टरले खेल नहेर्न सुझाव दिएपछि म्याराडोनाले भने – म ठीक छु
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल अन्तर्गत मंगलबार राति भएको अर्जेन्टिना र नाइजेरियाबीचको खेलमा पटक पटक रोमाञ्चक बनेका अर्जेन्टिनी लिजेण्ड डिएगो म्याराडोनालाई डाक्टरले बीचमै खेल्न छाड्न सुझाएका थिए । तर उनले भने, ‘म ठीक छु ।’ ५७ वर्षका म्याराडोनाले सन् १९८६ मा विश्वकप जिताउँदा अर्जेन्टिनी टिमको कप्तानी गरेका थिए । मंगलबार अर्जेन्टिनाले नाइजेरियालाई २-१ ले हराउँदा म्याराडोना […]
विश्वकप : लाइभमै किस गर्न खोज्नेलाई ब्राजिलकी रिपोर्टरले झपारिन्
काठमाडौं । रुसबाट विश्वकप खेलको बारेमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा एक व्यक्तिले एक्कासी आएर गालामा चुम्न खोजेपछि ब्राजिलकी एक खेल पत्रकारले तीनलाई झपारेकी छिन् । टीभी ग्लोबो र स्पोर्टस् टिभीकी पत्रकार जुलिया गुमारेइस आइतबार बिहान एकाटेरिनबर्गबाट जापान र सेनेगलबीचको खेल हुँदै गर्दा रंगशाला बाहिरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा थिइन् । यत्तिकैमा एक व्यक्ति उनी नजिक आएर चुम्ने प्रयास […]
सुत्न नदिने इरानी समर्थकलाई रोनाल्डो भने – हल्ला धेरै भयो
११ असार, काठमाडौं । विश्वकपका दुई खेलमा चार गोल गरिसकेका पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको निन्द्रा इरानी समर्थकले बिगारिदिएका छन् । सोमबार समूह चरणको अन्तिम तथा अघिल्लो चरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको खेलमा पोर्चुगलले इरानको सामना गर्दै छ । त्यसको अघिल्लो रात रोनाल्डो राम्ररी निदाउन पाएनन् । आइतबार राति इरानी समर्थक रोनाल्डो बसेको होटलबाहिर आएर ठूलो […]
जन्मदिनमा हँसाए मेस्सीले, मस्कोमा मेस्सी केक
पहिलो खेलमा आइसल्याण्डसँग १–१ को बराबरीमा साथै दोस्रो खेलमा क्रोयसियासँग अप्रत्याशित ३–० को हार भोगेपछि अर्जेन्टिनी टिम विश्वकपमा समस्यामा छ । प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओलीसँगै खेलाडीहरु पनि नाइजेरीयासँग हुने समूह चरणको अन्तिम खेलमा केन्द्रित छन् । नाइजेरीयासँग पराजित भए अर्जेन्टिना विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिने छ । यस्तोमा निराशा र अभ्यासमा लगाएको एकाग्रताकै बीच आइतबार कप्तान लियोनल […]
विश्वकपमा ‘यहुदी विरोधी’ गीत गाएका समर्थकलाई ५ वर्ष फुटबल हेर्न प्रतिबन्ध
१० असार काठमाडौं । इंग्ल्याण्डका एक फुटबल समर्थकलाई विश्वकपको समयमा यहुदी विरोधी गीत गाउँदै नाजी शैलीमा सलाम गरेको आरोपमा सबै खालको फुटबलबाट पाँच वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । डर्बीका ५७ वर्षका माइकल हर्बटलाई लेस्टर म्याजिस्ट्रेट कोर्टले पाँच वर्षको प्रतिबन्ध सुनाएको हो । इंग्ल्याडका फुटबल समर्थहरुबाट अनलाइनमा भाइरल भएको एक भिडियोमा उनले रुसको भोल्गोग्राड शहरको […]